Suuq-geynta Cannabis | Immisa ayey Leafly iyo Weedmaps ka qaadaa dukaamo lagu gado | 2021
Waa imisa qiimaha Leafly & Weedmaps si loogu Xayeysiiyo 2021?
Immisa ayey Leafly &…
Suuq-geynta Cannabis | Immisa ayey Lefly & Weedmaps ku Bixinaysaa Xayeysiinta?
Cusbooneysii 2 / 15 / 2021
Cusbooneysii 11 / 5 / 2019
Cusbooneysii 10 / 8 / 2018
Sidee Loogu Kordhiyaa Daawadaada Caafimaadka Leafly
Sidee Loogu Kordhiyaa Daawadaada Weedmaps
Hubinta Xaqiiqada dhabta ah ee adduunka
Tallaabada 4 U raadi ganacsigaaga adoo adeegsanaya iPhone
Warbixinta tartameyaasha bilaashka ah ee SEO ee ku saabsan bukaan-socodka, $ 500 doolar qiime. Bixintu waxay dhammaanaysaa 4/15/2021. Buuxi foomka ama wac 1-425-351-1517
Qiimaha Injineerka Mashiinka Raadinta ee qorshaha suuqgeynta xashiishka.
Keebaa Ka Mid Ah Seddexdan Ikhtiyaar Suuq-geyn ee Bixiya Macaamiisha Ugu Badan?
Waad salaaman tihiin magacaygu waa James Meshach, the suuq geynta cannabis agaasimaha Isenselogic.com. Sidoo kale anigu waxaan ahay milkiile caafimaad oo hore, iyo Microsoft Database, injineer. Khibrad u lahaanshaha socodsiinta xarun caafimaad waxaan ogahay waxa ay u baahan tahay si loo kobciyo meherad madadaalo ama madadaalo iyadoo la adeegsanayo suuq geynta internetka. Erayga afka, boorarka, iyo joornaalada ka sokow inta badan macaamiishaada cusubi waxay kaa helayaan internetka. Saddexda xulasho ee ugu waaweyn ee ay heli karaan milkiilayaasha daaweyntu waa kuwan soo socda. Waxaan ka soo ururiyey macluumaad macaamiishayda iyo internetka oo dhan si aan kaaga caawiyo inaad gaarto go'aan xog dheeri ah oo ku saabsan halka lagu kharash gareynayo suuqgeynta suuqgeynta xashiishka.
Isku-hagaajinta Mashiinka Goobidda ama SEO
Sababta aad boggan u heshay waa sababta oo ah khariidadaha Leafly iyo Weed ay isticmaalaan a nidaamka qiimaynta qarsoon inay isku dayaan inay kordhiyaan lacagta ay ka qaadi karaan magaalo kasta iyo gobol kasta. Tusaale ahaan, waxay u sheegi doonaan qaybta caafimaadka (A) ee Seattle haddii ay rabaan in lagu qoro 10-ka sare waxay uga kacaysaa $ 1500 bishii. Kadib waxay aadi doonaan qeybta caafimaadka ee soo socota (B) waxayna u sheegi doonaan hadii ay rabaan inay ka mid noqdaan 3-da ugu sareysa waxay ku kici doontaa iyaga $ 5000 bishii. Kadibna wakiilada iibka ayaa isku dayi doona inay helaan $ 20,000 bishiiba si loogu qoro nambarka 1 laga bilaabo faafinta (c). Bar kasta oo qiimaheedu wuu ka duwanaan doonaa magaalo kasta oo ay daboolaan. Meesha magaalooyin yar yar ay ku kici doonaan suuqyo waaweyn sida Denver ama Los Angeles waxaad filan kartaa inaad bixiso sankaaga haddii aad rabto inaad ku qorto saddexda boos ee ugu sareeya. Inkasta oo qiimaha aasaasiga ah ee laga helayo barnaamijyadan uu u dhexeyn doono $ 420 ilaa $ 800 doolar bishiiba si loo galo 3-da boos ee ugu sarreeya kharashka ayaa aad uga badan doona. Hoos waxaan ku dhajinay xiriiriyeyaal ka socda internetka oo dhan waxa ay soo sheegayaan milkiileyaasha kale ee daawada bixiya oo ay la socdaan falanqeyn ku saabsan qorshaha suuq-geynta ee habka ugu fiican u shaqeynayo.
Mid ka mid ah isticmaalayaasha 'Reddit' ayaa soo sheegaya in Khariidadaha Weed ay ka qaadayaan $ 420 Bishiiba liisaska aasaasiga ah, oo ay ku jiraan is-dhexgalka menu. Si laguu qoro marka hore ka filo lambarradaasi inay kor u kacdo $ 10,000 oo lagu daro bishii iyadoo kuxiran magaalada aad ku sugan tahay.
Fiiri: Ma weedmaps-ka ayaa lacag ka qaadaya liiska? : OKmarijuana (reddit.com)
Mid ka mid ah macaamiisheenna SEO ee ku sugan aagga Seattle ayaa soo sheegaya in Leafly ay ka dalbeyso $ 750 ilaa $ 10,000 bishiiba qaybta lagu iibiyo xashiishadda madaddaalada. Isagu ma uusan haysan qiimaha Weedmaps laakiin waxaad u maleyn kartaa inay ku dhowdahay isla xadkaas. Suuqyada waawayn sida Colorado iyo Kalifoorniya, waxaad filan kartaa inaad wax badan ku bixiso warbixinnada illaa $ 50,000 bishiiba aagga Los Angeles.
Waxaan la hadlay dhowr nooc oo kale maanta iyo Qiimaha Weedmaps ayaa soo xigtay hal sumcad $ 30,000 / bishii oo lagu qoro dhammaan California. Summad kale oo qaran ayaa laga soo xigtay in ka badan $ 100,000 / bishii in lagu qoro.
Waxa ugu horreeya ee aad rabto inaad ogaato ayaa ah ikhtiyaarka keenaya macaamiisha ugu badan. Waxyaabaha labaad ee aad ubaahantahay inaad ogaato waa intee in le'eg miisaaniyadaada xayeysiinta ah ee aad rabto inaad kubixiso bishiiba liis kasta.
Dhibic 1·sano ka hor 1
waxay kuxirantahay halka aad ka rabto liiskaaga laakiin dahabka, qalinka, liisaska naxaasku waxay socon karaan inta udhaxeysa 10-20k iyadoo kuxiran magaalada. suurto gal ka badan. liisaska xirmooyinka dhexe ee aasaasiga ah waxay si fudud u socdaan 3k +
Marka waxay u egtahay Qiimaha Weedmaps waa Milkiileyaasha ROBBING ee daawada bixiya 10,000 ilaa 20,000 bishii ee magaalooyin dhexdhexaad ah ama weyn.
Leafy waxay ku dalacsiisaa dawooyin si ay ugu xayeysiiso tirada dareenka isla markaana waxay kuxirantahay hadba sida ay u weyntahay bartilmaameedka magaalada suuqu. Dariiqa kaliya ee si dhab ah loogu ogaan karo inta lacag bixin ee Leafly ee daaweyntaada laga bixiyo waa inaad la xiriirto websaydhkooda oo aad ka hesho xirmo warbaahineed. Waan ogahay mid ka mid ah macaamiishayda oo ku yaal magaalada Tacoma Washington Leafly waxay ka qaadaan $ 3000 bishii si loogu qoro lambarka 3 ee suuqaas. Tacoma waxaa loo tixgeliyaa inay tahay magaalo cabbir dhexdhexaad ah sidaa darteed waxaad filan kartaa in qiimayaashu ay ka sarreeyaan magaalo sida Seattle oo kale oo laga yaabo inay afar laab u noqoto magaalooyinka waaweyn sida Los Angeles ama San Francisco. Baadhitaan aan ka sameeyay internetka waxaan ku ogaaday in hal milkiile ganacsi uu bixinayo Leafly $ 10,000 bishii bil kasta 4 dawooyin oo loogu talo galay xidhmooyinkooda Maarta ah oo ay ku qoran yihiin lambarka dhabta ah ee dunida 3. Tani waxay u soo baxdaa $ 2500 bishiiba meel kasta.
Dhagsii bogga xalinta dawada ee Leafly ka dibna dhagsii badhanka oranaya "sheeg dawadaada". Ka dib markaad buuxiso Magacaaga Ganacsi, macluumaadka xiriirka, cinwaanka, iyo lambarka taleefanka wakiil ka socda Leafly ayaa kuu soo wacaya si aad uga gudubto qiimaha iyo qorshooyinka ikhtiyaariga ah ee xirmadaada dejinta hore. Qiimaha iyo qorshayaashu had iyo jeer way isbedelayaan tan iyo markii ay isku dayaan inay ka faa'iideystaan ​​xaqiiqda ah inay qariyeen qiimahooda isla qaab isku mid ah Weedmaps.
Markii ugu horaysay ee aan bilaabay daawada marijuana ee dawada ee 2014 “Weedmaps.com waxaay ka qaadi jirtay lacag dhan $ 400 ilaa $ 1500 bishii iyadoo kuxiran booska iyo baaxada suuqa. Iyadoo sharciyeynta marijuana, sicirkaas ayaa cirka isku shareeray. Hadda waxaan baranay in Weedmaps.com ay ka qaadeyso illaa 30,000 bishii bil kasta magaalooyinka California iyo ilaa 100,000 bishiiba noocyada iibiyayaasha qaranka. Inta badan magaalooyinka yaryar waxay filan karaan inay bixiyaan meelkasta oo ka bilaabanta $ 1000 ilaa $ 3000 bishii xirmooyinka aasaasiga ah. Dhawaan waxaan la hadlay wakiilka Weedmaps oo ii xaqiijiyay in qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ee magaalada Los Angels ay 30,000 bishii ku qaataan XNUMX si ay u noqdaan lambarka koowaad ee galkoodu. Waxay sharaxday in Weedmaps ay ka bilaabatay Kalifoorniya sidaas darteedna ay leedahay suuq ballaaran oo ay dalban karto qiimayaashan sare. Eeg Reddit Link ee kore si aad u hesho tixraac.
Si aad u bilawdo waxaad u baahan tahay inaad codsi u dirto in marijuana-gaaga madadaalada ama caafimaadka lagu daro oo lagu daro agaasimaha Weedmaps. Guji halkan si loogu daro daawadaada. Waxaad marka hore ubaahan doontaa inaad sameysato koonto bilaash ah ka dibna ku dar faahfaahintaada daaweynta.
Ka dib markaad ku darto macluumaadkaaga wakiil ayaa kula soo xiriiri doona sida loo furo koontadaada. Markaad xulato qorshe waxaad aadi doontaa qandaraas bil-bil ah waxayna qaadan doonaan macluumaadka kaarkaaga deynta si bil walba laguugu soo diro.
Tilaabada 1: Go'aamso heerka dhexdhexaadka ah ee Macaamiisha Cannabis ay u adeegsato inay ku hesho maadadaada madadaalada ama daawada marijuana.
Sida laga soo xigtay kooxda aan macaash doonka ahayn ee maxalliga ah ee loo yaqaan 'Seach Association', dariiqa koowaad ee sida ay macaamiisha xashiishadda u helaan ay ku helaan dawooyinka waa iyada oo loo marayo matoorada raadinta ee ka soo baxaya boqolkiiba 65 haddii aad tiriso raadinta moobiilka xitaa way ka sii sarreeysaa boqolkiiba 80.
Step 2: Determine what are the top searched terms for your type of business. By using Moz.com keyword search tool which is free, we come up with the following list.
Suuqgeynta Daawada | Furaha Keydka La Raadinayo
Tallaabada 3 Aad Google oo Nooc Dispensar Near [Magaaladaada] Tusaalahan waxaan u adeegsannaa mid ka mid ah macaamiisheena Cannabis Green Collar oo ku yaal Tacoma Washington.
Saddexda meelood ee ugu sareeya waa waxa aan ugu yeerno 3-baako, kuwani waa jagooyin aan LAGU bixin karin google, waa waxa ay go'aamiyaan inay yihiin ciyaarta ugu fiican ee raadinta iyadoo lagu saleynayo boqolaal arrimood oo kala duwan. Qodobka ugu muhiimsan waa goobta uu ku yaal baaraha. Tusaale ahaan, Haddii aad ka raadisay (qaybta caafimaadka ee aniga ii dhow) koonfurta Tacoma, rugta caafimaad ee ugu dhow baaraha ayaa marka hore soo bixi doonta. Tacoma waxaa ku yaal in ka badan 40 goobood oo daaweyn ah markaa haddii aadan ku jirin saddexda ugu sarreysa aad ayey u badan tahay inuusan isticmaalehu helin bakhaarkaaga isla markaana macmiilkaasi u tegi lahaa kuwa kula tartamaya. Xusuusnow jaantuska ururka raadinta deegaanka. Boqolkiiba 33 macaamiisha waxay aadaan natiijada ugu horeysa ee liistada, waxay ku dhacaysaa tiro dhan 12% booska 2 iyo kaliya 8 boqolkiiba booska lambarka 3. Jaantuskani wuxuu sidoo kale khuseeyaa meelaha ugu horreeya ee lagu daabaco Khariidadaha Weed ama Leafly, taasi waa sababta Waxay ka qaadaan qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka $ 50,000 bishii si ay ugu noqdaan booska koowaad ee suuqyada waaweyn.
I Telefoonada waxay u isticmaalaan makiinadooda raadinta gaar ah meheradaha maxalliga ah, haddii meheraddaadu aysan ka soo muuqan baarayaasha Khariidadda iPhone-ka waxaad ka maqantahay macmiil kasta oo u isticmaala taleefankooda raadinta jihada ganacsiga maxalliga ah. Si loo hubiyo in meheraddaada laga baari karo Iphone-ka ka diiwaangeli meheraddaada Apple Meelaha.
Qaar badan oo ka mid ah tartamayaashaada ma ogaan doonaan tan waxaadna horay uga sii socon kartaa xirmada adoo adeegsanaya tilmaantan fudud. Tusaale ahaan, haddii aan ka raadinno Dispensaries Near Seattle ee Google waxaan helnaa in ka badan 100 xarun caafimaad laakiin kaliya 20 ayaa ka muuqda Apple iPhone Raadinta!
Raadinta iPhone-ka Dispensary
Tilaabada 5: Ka qaad codbixinta macaamiisha cusub si aad u go'aamiso sida macaamiisha ay uga helayaan goobta xashiishadda.
Kadib markaad go'aamiso halka ay meheraddaadu ka taagan tahay raadinta aasaasiga ah ee suuq-geynta suuq-geynta xashiishka waxaad u baahan tahay inaad go'aan ka gaarto habka ugu wanaagsan ee lagu kordhin karo iibka daawada. Isenselogic.com waxay kugula talineysaa in xarun kasta oo caafimaad ay ka qaado codbixin macaamiisha cusub ee imaaneysa muddo labo todobaad ah si loo ogaado sida loo helo bakhaarkooda. Tani waxay sidoo kale siin doontaa BASELINE ama barta bilowga ah ee ku saabsan sida looga faa'iideysanayo miisaaniyaddooda xayeysiinta. Inta badan macaamiisheennu waxay ogaadaan in boqolkiiba 80 dhammaan macaamiisha cusub ay ka yimaadaan Google Search. Inta soo hartay waxay u qaybsan yihiin Boodhadhka, Goobaha Diiwaanka, ereyga afka, iyo baabuur-byes.
Miiskaaga ayaa ka muuqda magaalooyinka ku hareeraysan, gaar ahaan magaalooyinka qalalan?
One of the primary ways that Isenselogic.com stands out over other cannabis marketing firms is that the owner ACTUALLY owned a dispensary and had to deal with different state city and zoning laws that do not apply to regular brick and mortar operations. Many cities will have bans on recreational and medical marijuana dispensaries and you can use this as your advantage by using our special search engine optimization techniques to show up in surrounding cities. While your competitors ignore these dry cities we hit them hard to bring you more traffic and revenue. In the graphic below the city of Tacoma allows marijuana dispensaries but the nearby city of Lakewood Washington does not. Also the major city and military base of Joint Base Fort Lewis Mccord does not allow dispensaries.
In kasta oo cinwaanka muuqaalka cagaaran ee Green Collar cinwaankiisu yahay Tacoma Washington haddana magaalada Lakewood WA waxay mamnuucday in dawooyinka lagu shubo iyadoo la isticmaalayo caadada Isenselogic.com suuq geynta cannabis farsamooyin aan ku soo bandhigi karno meheraddaadu inta badan magaalooyinka ku hareeraysan adiga oo ku siinaya adiga Faa'iido weyn oo ka weyn tartamayaashaada.
suuq geynta cannabis
Magacaaga Koowaad (waa loo baahan yahay)
Magacaaga Dambe (waa loo baahan yahay)
URL-kaaga Websaydhkaaga (waa loo baahan yahay Gali N / A haddii aan la go'aansan)
Xirmooyinka Ganacsiga (waa loo baahan yahay)
Websaydh Ganacsi YarXidhmada Websaydhka Heerka ahWebsaydh Weyn eCommereceXidhmada SEO XidhmadaQorshaha Ganacsiga Yaryar ee SEOQorshaha Ganacsiga SEO ee DhexdhexaadQorshe Ganacsi oo Weyn SEOQorshaha Meelaha badan ee SEO
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Shirkaddaada
Waxaad ka heli kartaa faraqyo fara badan oo kaladuwan oo ka socda shirkadaha kala duwan ee SEO oo leh xirmooyin bilaw ah oo ka socda $ 500 bishii illaa jidka oo dhan illaa 10,000 bishii iyo wixii ka sarreeya. In badan oo ka mid ah waxay kuxirantahay hadba sida uu u weyn yahay bartilmaameedka suuqa iyo inta uu le'eg yahay tartanka loogu jiro erayga muhiimka ah. Shirkadaha SEO waxay bixiyaan adeegyo noocyo kala duwan leh baakado kala duwan. Xirmooyinka aasaasiga ah waxay ka socdaan $ 500 illaa $ 5000 bishii waxayna leeyihiin qorshe ah in ganacsiga la siiyo fursad koritaan joogto ah maaddaama qiimeynta Google ay bilaabmayso inay kordhiso ayna siiso qasabno badan ganacsiga. Sidoo kale, filo inaad bixiso khidmadda haddii aad leedahay meelo badan oo ganacsigaaga ah oo ay weheliso goobo badan. Eeg https://www.audiencebloom.com/how-much-does-seo-cost/
Waxaa jira laba siyaabood oo lagu go'aamin karo qiimahaaga macaamiil kasta oo ka imanaya xulashooyinka internetka ee suuq geynta xashiishka.
Hal dariiqo ayaa ah inaad weydiiso macaamiishaada cusub sida ay kuu heleen oo aad liis gareyso ka dibna ku dar boqolkiiba boqolleyda. Jidka kale waa warbixinnada SEO iyo Google Webmaster click-through reports. Every store should at least 1 week per month survey incoming customers and keep track of how they found your store. Some might find you through magazine ads, Billboards, Weedmaps, Leafly, Google, Yahoo, or Bing Searches. One of my favorite SEO reports is the referrer page report which shows precise information on how new customers are finding your business.
Gadiidka Gudbinta Sare
si toos ah 12267 70%
Xarunta Cannabis 162 1%
Wadarta Guji 17452
Tani runti waa xogta dhabta ah ee mid ka mid ah macaamiisheenna Xashiishad Collar Cagaaran oo ku yaal Tacoma Washington.
Lambarka koowaad waa qasabno toos ah taas oo macnaheedu yahay macaamiisha dhab ahaan ku qortay Cannabis Green Collar ama nooc kale oo ka mid ah sumadda magaca si loo gaaro websaydhka. Nambarada hoose ee aadka u daneynaya maamulka. Ilaa hadda tirada ugu badan ee taraafikada waxay ka imaaneysaa Google iyadoo la adeegsanayo 4366 guji bishiiba iyada oo inta kale ee xawilayaashu si xawli ah uga sii baxayaan intaas ka dib. Mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaad ogaato ayaa ah in Weedmaps iyo Leafly xitaa aysan ka muuqan kan ugu sareeya 10. Xitaa shabakada bilaashka ah ee Potguide.com waxay keeneysaa macaamiil ka badan inta ay yihiin hogaamiyaasha warshadaha aasaasiga ah. Sidee taasi noqon kartaa?
Hagaag aan eegno raadinta dhabta ah ee Google oo aan aragno waxa soo kordha
Markii aan Raadinayno Dukaammada Edmonds Pot waxaan aragnaa in Google ay soo bandhigeyso saddex-xidhmo ah KA HOR marka hore dhammaan raadinta kale. Isticmaalkan ayaa noqonaya 7 xirmo laakiin google ayaa hoos u dhigay sanadkii lasoo dhaafay si loogu qasbo ganacsiyada badan inay bixiyaan ereyada Google Ad. Marka xigta ee aan aragno waxa loogu yeero natiijooyinka dabiiciga ah. Kuwani waa liisaska dabiiciga ah ee Google ee aan la siinin xayeysiis. Tani waa muhiim maxaa yeelay boqolkiiba 90 macaamiisha MA gujiso xayeysiiska. Macaamiisha ayaa loo tababaray inay aaminaan liisaska google-ka ee marka hore soo baxa maxaa yeelay waxay u maleynayaan hadey tahay haddii Google ay ku kalsoon tahay sidoo kale aniga. Websaydhka ugu horreeya ee aan aragno waa Potguide.com taas oo macno samayn doonta maxaa yeelay taasi waa barta ugu sarreysa liistada tixraacayaga marka laga reebo makiinadaha waaweyn ee raadinta iyo baraha bulshada.
Leafly.com ma soo baxdo illaa booska 8 iyo Weedmaps xitaa kuma qorna bogga koowaad. Jaantuska kor ku xusan waxaan ka arki karnaa in liisaska ugu horreeya ee dabiiciga ah ee mashiinnada raadinta ay helayaan boqolkiiba 36 dhammaan qasabadaha hoos u dhacaya qeyb ahaan booska 2 oo leh boosaska 3 illaa 20 soo socda ..
Halkan waxaa ah isbarbardhigga saamiga suuqgeynta Canugga Raadinta ee Ogosto 2016 iyo Luulyo 2016, oo leh lambarradii bishii hore ee qaansada:
Wax kale: 0.62% (0.65%)
Laga bilaabo 2016 Google wuxuu leeyahay boqolkiiba 80 saamiga suuqa ee raadinta khadka tooska ah. Laga soo bilaabo waayo-aragnimadayda, inta badan dadka isticmaala xashiishadda madadaalada waxay isticmaali doonaan taleefannadooda casriga ah ka dibna Google si ay u helaan ganacsiyada maxalliga ah. Ka fikir arrintaas? Maxaad u adeegsataa inaad ku hesho ganacsiyada maxalliga ah? Qof walba wuu garanayaa Google. Kaliya boqolkiiba boqol ee macaamiisha ayaa si toos ah u isticmaali doona Weedmaps ama Leafly si ay u helaan meel ay kaga iibsadaan xashiishka. Xogta kor ku xusan waxaan ku go'aamin karnaa in SEO uu noqon doono sida ugu wanaagsan ee ganacsi kasta oo yar uu u maalgashan karo helitaanka macaamiil cusub. Leafly.com iyo Weedmaps.com waxay u egyihiin inay keeneen macaamiil eber ah oo aan daboolin qiimaha suuqgeynta ganacsiga xashiishka ee maxalliga ah. Sidii aan horay u sheegayba waa inaad si dhab ah u weydiisaa macaamiisha cusub inay kugu heleen adiga oo isticmaalaya Weedmaps ama Leafly waxaan u maleynayaa inaad ka nixi doonto natiijooyinka.
Isenselogic.com ku takhasusay Madadaalada iyo Daaweynta Marijuana ee Raadinta Mashiinka. Our packages for dispensaries start at $500 per month for small cities and max at $5000 for a month for large cities like Los Angeles or Denver. Check out some of our real-world results for some of our clients by visiting our homepage and call to receive a free SEO audit and competitor report. Whether you use our firm or another company don’t wait to start your SEO program, 40 percent of all customers do not search for a new marijuana dispensary after they find one. So every day you wait is losing market share. Isenselogic.com only does one dispensary per city as not to create a conflict of interest.
10 qalad ee ugu sareeya ee qashin-qaadashada marijuana ay ku sameeyaan websaydhkooda.
Category: blogBy koodhadhka December 13, 2017 7 Comments
Tags: SEO DispenesaryImmisa ayey khidmadda Leafly-ku ka qaadaysaa?Waa imisa kharashka Weedmaps?LeaflyMarijuana SEOkhariidadaha weed
About the Author: koodhadhka
Previouspost Previous:Immisa ayey Leedahay Macaamiisha Cusbital Cusub?Nextpost Next:10 qalad ee ugu sareeya ee qashin-qaadashada marijuana ay ku sameeyaan websaydhkooda.
Sidee Qashin-qaadasho u xisaabiyaa halkaas ROI Ee SEO
Fayraska 'Corona Virus' kii Ugu Weynaa Ee Taariikh Ahaan La Qabto
Xeer ilaaliyihii ugu musuqmaasuqa badnaa taariikhda Mareykanka?
Mark Lindquist Wizard-ga Weyn
Facecrook Insider wuu qirayaa Dhamaan
William Cooper iyo Dhibcaha Sirdoonka
Suuqa Beeraleyda Cannabis wuxuu leeyahay,
November 6, 2020 at 7: 16 pm
Waxaan rumeysanahay inay tani tahay maqaal wax ku ool ah oo loogu talagalay marijuana SEO waana mid waxtar badan oo aqoon leh.
Runtii aad baan uga helay akhrinta qoraalkan. xiise weyn, mahadsanid!
Damien Krampitz wuxuu leeyahay,
November 8, 2020 at 10: am 55
Xayeysiisyada xashiishka ee lagu qarash gareeyay Leafly iyo Weedmaps ayaa ah qaab qaali loogu yahay waxa ay bixiso, waxaan raadineynaa shirkad wanaagsan oo SEO ah si ay nooga hesho google sare.
Christopher Smith Aragtida cagaaran wuxuu leeyahay,
December 7, 2020 at 3: 30 pm
Waxaan raadinayey hage ku saabsan sida loo suuq geeyo dawadaada iyo hagahani waa bilow fiican. mahadsanid.
Isbitaalka Wadajirka ah wuxuu leeyahay,
December 8, 2020 at 9: am 44
Runtii waxtar badan iyo baahi badan oo loo baahan yahay. Waxaan su'aal kaa qabaa sidii aan u bilaabay degelkeyga. Waxay jirtaa 2 toddobaad waxaanan u qorayaa nuxur ahaan. S: - Waa maxay waqtiga saxda ah ee lagu bilaabayo bogga SEO-ka ee boggaaga? Miyaan qori karaa 15 illaa 20 farriimood ka hor intaanan hirgelin tilmaamaha qaarkood ee aad halkan ku bixisay? Waxaan hadda ka bilaabay xarun caafimaad xarun caafimaad oo ku taal Michigan waxaanan jeclaan lahaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan marijuana marikting
Pingback: Naadiga San Diego Hemp Naxariista
Noocyada 'Medical Medical Marijuana' wuxuu leeyahay,
December 24, 2020 at 10: 06 pm
Waxaan raadineynay shirkad suuq geynaysa xashiishka inay sameyso SEO-geena in mudo ah, waxay umuuqataa idinkoo khibrad leh oo macaamiisha ah inay taageeraan. Ayaa kula soo xiriiri doona sooon
ka qaybgal wuxuu leeyahay,
January 2, 2021 at 4: am 02
Waad ku mahadsantahay talabixinta weyn ee talo bixinta suuq geynta ee ku saabsan iska diiwaangelinta meelaha Apple si loo hubiyo in qeybtayada daawada ay ka muuqatay raadiyaasha iPhone.
cinwaanka email aan la daabacin doonaa. Beeraha loo baahan yahay waxaa lagu calaamadeeyay *
Magaca * Email * website
foom cadFaallooyinka boostada
Sababta ugu sareysa 10 Sababta Q-ANON waxay noqon kartaa PSY-OP gadaal